कर्णाली प्रदेशका पहिलो सङ्क्रमित युवाको बारेमा थप खुल्यो नयाँ रहस्य ! कोरोना पुष्टि भएको २३ घण्टापछि आइसोलेसनमा लगियो ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कर्णाली प्रदेशका पहिलो सङ्क्रमित युवाको बारेमा थप खुल्यो नयाँ रहस्य ! कोरोना पुष्टि भएको २३ घण्टापछि आइसोलेसनमा लगियो !
कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको २३ घण्टापछि कोरोना सङ्क्रमित युवाको उपचार शुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेशका पहिलो सङ्क्रमित युवाको उपचारमा भने अन्योलता देखिएपछि २३ घण्टापछि उहाँलाई दैलेखको आइसोलेशनमा ल्याइएको छ । सुर्खेत लैजाने वा दैलेखको आइसोलेशनमा राख्ने भन्ने विषयमा केही समय अन्योलता उत्पन्न भएको थियो ।
कोरोना सङ्क्रमित युवा भारतको आग्रा भन्ने ठाउँमा आलु स्टोरमा काम गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ । आग्राबाट ४९ सदस्यीय टोली गत चैत १८ गते कञ्चनपुर गड्डाचौकी नाकामा आइपुगेको थियो । उनीहरु त्यहाँ करिब ४५ दिन क्वारेन्टिनमा बसेका थिए ।
यस कारण कुलमान घिसिङले निर्देशक पदमा निरन्तरता नपाउने
असोज पाँच गते अदालत जाँदै रवि लामिछाने